FA-016 Nwoke Fajas-Oke Shaper Mkpakọ Uwe maka ụmụ nwoke
● YUBEIYE Size NDỤMỌDỤ: Ọ bụrụ na ịnọ n'ókè n'etiti nha abụọ, ọ ka mma ịhọrọ nha ọzọ.
● YUBEIIYE Waist Trainer for Men, Mens Waist Trimmer Corsets Sweat Belt Sauna Suit for Fitness body Shaper with Steel Bone
● Nko na akaghị mmechi
● Ọsụsọ ọzọ Onye na-enye ọzụzụ n'úkwù maka ụmụ nwoke na-enye arụmọrụ ọzụzụ dị mma maka úkwù gị na abs, akwa polymer ọhụrụ na-ekpochi okpomọkụ si n'ime ya, hapụ abụba afọ gị ngwa ngwa na ọsụsọ n'úkwù gị.
● ọmarịcha akwa trimmer maka ụmụ nwoke akwa polymer dochie ihe Neoprene ọdịnala, na-enye mmetụta na-enweghị isi na-adị mfe karị, onye na-enye ọzụzụ nwoke a bụ ihe ị ga-eyi maka ịgba ọsọ na mgbatị ahụ.
● Nkwado azụ Nko nwere okpukpu anọ siri ike na anya na-ekwe nkwa nkwado siri ike dị ala mgbe ị na-azụ ọzụzụ, nke siri ike na nke na-adịghị akwa ákwá, gbanwee ọnọdụ gị nke ọma na n'efu mgbe ị na-eyi, mee ka mgbu azụ gị dị ala ma mee ka ị nwekwuo obi ike.
● Nhazi Pụrụ Iche Onye na-enye ọzụzụ n'úkwù maka ụmụ nwoke bụ ihe ị ga-achọ iyi ma ọzụzụ ma ndụ kwa ụbọchị, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe a na-adịghị ahụ anya nke zoro ezo n'okpuru uwe elu ma ọ bụ mkpuchi, bụ onyinye dị ịtụnanya nye ụmụ nwoke.
● Họrọ nha dabara adaba Biko họrọ nha kwesịrị ekwesị dabere na mpaghara afọ gị ka obosara kama dabere na nha jeans ma ọ bụ uwe elu gị.Enwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, anyị na-aṅụ iyi inye ndụmọdụ ọkachamara na ọrụ ahaziri maka gị.
Ihe mere ị chọrọ onye nkuzi ukwu
● Na-akwalite Ọsụsọ: Ọsụsọ na-enyere gị aka ifelata, ma ọ na-enyekwara aka wepụ nsị n'ahụ gị.Mgbe anyị na ọsụsọ na-enyere ahụ aka ịkwụsị ibu mmiri na nnu.
● Yiri Ha Ebe ọ bụla: A pụrụ iyi ndị na-enye ọzụzụ n'úkwù ebe ọ bụla.Achọghị ha naanị maka mgbatị ahụ.Ị nwere ike iyi ha gburugburu ụlọ mgbe ị na-arụ ọrụ, na-arụ ọrụ, na mgbatị ahụ.
● Na-akpụzi n'úkwù: Ndị na-enye ọzụzụ n'úkwù ndị nwoke ga-enyere gị aka inweta ụdị V na-enweghị atụ nke mara mma.Ị na-ahụ ha na fim mgbe niile ma ugbu a ị nwere ike nweta otu ọdịdị ahụ nanị site n'itinye onye na-enye ọzụzụ n'úkwù maka awa ole na ole n'ụbọchị.
● Na-eche abụba n'ebe a na-achọghị: Ndị na-enye ọzụzụ n'úkwù na-achọ abụba ndị isi ike nke nwere ike iwe iwe.Ọ ga-elekwasị anya n'úkwù, afọ, na mpaghara azụ.
Nke gara aga: Fa-015 Nwoke Fajas-Nri zuru oke maka ụmụ nwoke
Osote: Ohiri isi izizi nke ime afọ ime, akwa ime ime + nke nwere oghere iji dinara n'afọ gị n'oge ime ime, ọ dị mma maka mmiri mmiri Lavender
Uwe ejiji maka ụmụ nwanyị na-enweghị ntụpọ Firm Triple Contro...
FA-009 Beige fajas-Mkpakọ BBL mgbe ọ gasịrị